काठमाण्डौ । पुस महिनामा वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप र कर्जा लगानी दुवै बढेको देखिएको छ। नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन (एनबीए) ले आज सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार पुसमा वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप र कर्जा लगानी दुवै बढेको देखिएको हो। पुसमा वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप ८७ अर्ब रुपैयाँ बढेको छ। जब कि गत मंसिरमा वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप ४ अर्ब...
एक सातामै वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप रु. १४ अर्बले बढ्यो, कर्जा लगानीको अवस्था कस्तो छ ?
काठमाण्डौ । वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप पछिल्लो एक सातामा १४ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ। नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन (एनबीए) को पुस १० गतेदेखि पुस १६ गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप १४ अर्ब रुपैयाँले बढेको हो। योसँगै वाणिज्य बैंकहरुको कुल निक्षेप ४२ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। गत पुस ९ गतेसम्म बैंकहरुको कुल निक्षेप ४२ खर्ब...
पुस लागेयता कस्तो छ वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप र कर्जाको अवस्था ?
काठमाण्डौ । पुस लागेयता वाणिज्य बैंकहरुको कुल निक्षेप २ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ। नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन (एनबीए)को तथ्यांकले यस्तो देखाएको हो। गत मंसिर २९ गतेसम्म कुल निक्षेप ४२ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा पुस ९ गतेसम्म घटेर ४२ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ। पछिल्लो एक सातामा (पुस ३ गतेदेखि पुस ९ गतेसम्म) भने वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप...
वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप रु. ५ अर्बले घट्यो, कर्जा लगानी रु. ८ अर्बले बढ्यो
काठमाण्डौ । पछिल्लो एक सातामा वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप घटेको छ भने कर्जा लगानी बढेको छ। नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन (एनबीए) को गत मंसिर १८ गतेदेखि मंसिर २४ गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप ५ अर्ब रुपैयाँले घटेको हो। योसँग मंसिर २४ गतेसम्म वाणिज्य बैंकहरुको कुल निक्षेप ४२ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ। यसअघि मंसिर १७...
वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेपमा सुधार, एक सातामा रु. ७ अर्बले बढ्यो
काठमाण्डौ । मंसिर महिना लागेयता लगातार घटिरहेको वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप पछिल्लो एक साताको अवधिमा भने बढेको छ। नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन (एनबीए) सार्वजनिक गरेको मंसिर ११ गतेदेखि मंसिर १७ गतेसम्म तथ्यांकअनुसार वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप बढेको हो। यो अवधिमा बैंकहरुको निक्षेप ७ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ। योसँगै मंसिर १७ गतेसम्म वाणिज्य...
एक सातामै वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप रु. ७ अर्बले घट्यो, कर्जा लगानी रु. १४ अर्बले बढ्यो
काठमाण्डौ । पछिल्लो एक सातामा वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप घटेको छ भने कर्जा लगानी बढेको छ। नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन (एनबीए) ले आज सार्वजनिक गरेको (मंसिर ४ गतेदेखि मंसिर १० गतेसम्म) को तथ्यांकले यस्तो देखिएको हो। यो अवधिमा वाणिज्य बैंकहरुको कुल निक्षेप ७ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ। योसँगै मंसिर १० गतेसम्म वाणिज्य बैंकहरुको कुल ४२ खर्ब १९ अर्ब...
काठमाण्डौ । वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप घटेको छ भने कर्जा लगानी बढेको छ। नेपाल बैंकर्स संघ (एनबीए) को तथ्यांकअनुसार मंसिर १ गतेदेखि मंसिर ३ गतेसम्म निक्षेप घटेको र कर्जा लगानी बढेको देखिएको छ। यो अवधिमा वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप ७ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ। गत कात्तिक ३० गतेसम्म वाणिज्य बैंकहरुको कुल निक्षेप ४२ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ...
कात्तिकमा वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप रु. ३६ अर्बले घट्यो, कर्जा लगानी रु. ३६ अर्बले नै बढ्यो
काठमाण्डौ । कात्तिक महिना वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप संकलन घटेको छ भने कर्जा लगानी बढेको छ। नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन (एनबीए) का अनुसार कात्तिक महिनामा वाणिज्य बैंकहरु निक्षेप संकलन ३६ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ। यही महिना कर्जा लगानी भने ३६ अर्ब रुपैयाँले बढेको एनबीएको तथ्यांकले जनाएको छ। गत असोज ३१ गतेसम्म वाणिज्य बैंकहरुको कुल...
एनबीएद्वारा सीडी रेसियोमा लचकता अपनाउन आग्रह, मौद्रिक नीति समीक्षाका लागि दियो यस्ता सुझाव
काठमाण्डौ। नेपाल बैंकर्स संघ (एनबीए) ले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीति (प्रथम त्रैमासिक) समीक्षामा पछिल्लो समय देखिएको तरलताको चापलाई मध्यनजर गर्दै सीडी रेसियो, लिक्विडिटी रेसियो र सीआआरलगायतका विषयमा लचकता अपनाउने नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ। संघका नवनियुक्त अध्यक्ष उपाध्यायसहितका पदाधिकारी र गभर्नर महाप्रसाद...
कात्तिकयता वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप रु. ४६ अर्बले घट्यो, कर्जाको अवस्था के छ ?
काठमाण्डौ । कात्तिक अन्तिम साता पनि वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप संकलन घटेको छ भने कर्जा लगानी थोरै बढेको छ। नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन (एनबीए)ले आज सार्वजनिक गरेको कात्तिक १८ गतेदेखि कात्तिक २६ गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार वाणिज्य बैंकहरु निक्षेप घटेको देखिएको छ। यो अवधिमा वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप १५ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ। योसँगै...
काठमाण्डौ । पछिल्लो समय वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप संकलन लगातार घटिरहेको छ। नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन (एनबीएल) सार्वजनिक गरेको तथ्यांकबाट यस्तो देखिएको हो। कात्तिक महिना लागेयता वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप ३१ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ। गत असोज ३१ गतेसम्म कुल निक्षेप ४२ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा कात्तिक १७ गतेसम्म घटेर ४२ खर्ब ३८ अर्ब...
एनबीएको अध्यक्षमा अनिलकुमार उपाध्याय निर्विरोध
काठमाण्डौ । नेपाल बैंकर्स संघ (एनबीए) को अध्यक्षमा अनिलकुमार उपाध्याय निर्विरोध निर्वाचित हुने भएका छन्। एनबीएको आउँदो कात्तिक २३ गते हुने निर्वाचनका लागि बुधबार २ बजेसम्म मनोनयन गर्ने समय तोकिएको थियो । तोकिएको समयसम्म अध्यक्षमा उपाध्यायको मात्रै आवेदन परेकोले उनी निर्विरोध निर्वाचित हुने निश्चित भएको हो। अब एनबीएका अध्यक्ष भुवन...
काठमाण्डौ । कात्तिकको दोस्रो साता वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप घटेको छ भने कर्जा लगानी बढेको छ। नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन (एनबीए) ले गत कात्तिक ६ गतेदेखि कात्तिक १२ गतेसम्मको सार्वजनिक गरेको तथ्यांकबाट यस्तो देखिएको हो। कात्तिकको दोस्रो साता निक्षेप २ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ। योसँगै कुल निक्षेप ४२ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ। यसअघि गत...
एक सातामै वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप रु. २० अर्बले घट्यो, कर्जा लगानीको अवस्था के छ ?
काठमाण्डौ । तरलता संकट भोगिरहेका वाणिज्य बैंकहरुको कात्तिकको पहिलो साता निक्षेप संकलन घटेको छ भने कर्जा परिचलन स्थिर देखिएको छ। नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन (एनबीए) का अनुसार कात्तिकको पहिलो साता वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप २० अर्ब रुपैयाँले घटेको छ। गत असोज ३१ गतेसम्म कुल निक्षेप ४२ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा कात्तिक ५ गतेसम्म घटेर ४२...
अन्ततः सिंगल डिजीटमा झर्यो बैंकले निक्षेपमा दिने ब्याजदर, कुन बैंकको नयाँ ब्याजदर कति ?(सूचीसहित)
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्रबैंकको ३ बुँदे सर्कुलरपछि ब्याजदर युद्ध अन्त भएको छ । योसँगै वाणिज्य बैंकका सीइओहरुले आपसमा गरेको सहमति समेत धमाधम कार्यान्वयन हुन थालेको छ । यो समाचार तयार पार्दासम्म आधादर्जन बढी वाणिज्य बैंकले कात्तिकमा लागू हुने यसअघिको ब्याजदर संसोधन गरी प्रकाशित गरेका छन् । हालसम्म प्रकाशित ब्याजदर अनुसार सबैले...